Rindrambaiko maimaimpoana any an-tsekoly | Avy amin'ny Linux
Ny lahatsoratra manaraka dia avy amin'ny namana iray, injeniera, mpampianatra siansa informatika any Chiapas, Mexico.
Androany isika dia hiresaka programa izay azontsika ampiasaina amin'ny ambaratonga faharoa, indrindra ny sehatry ny solosaina, mifototra amin'ny traikefa kely an'ny mpizara anao, izay antenaiko hahasoa ary hiteraka isaky ny mpampianatra ny fandraisana andraikitra. Noho izany tsy mila adim-potoana intsony dia manomboka isika:
Araka ny fantatry ny rehetra tsara amin'ny andrim-panjakana, ny rindrambaiko rehetra apetraka amin'ny solosaina dia tsy maintsy manana fahazoan-dàlana am-boalohany hisorohana ny sazy ataon'ny andrim-panjakana na fanjakan'ny federaly, izany dia rariny tokoa satria ny asan'ireo mpandahatra programa rehetra ireo manana vidiny izy io ary noho izany dia nohofaina izy ireo. Soa ihany koa fa misy safidy hafa, iray izay maimaim-poana, tsy lafo ary manome kalitao mitovy amin'ny programa manana. Andao hojerentsika kely ny:
Ny tsy fahalalana dia singa iray mpiorina voalohany amin'ny tsy fampiasana rindrambaiko maimaim-poana, noho ny zava-misy fa ny andrim-panjakana ambony dia tsy mampiasa CD mivantana amin'ny fizarana x na Linux amin'ny lohahevitra momba ny computing tsotra, mametra ny tenanao manonona ireo rafitra miasa hafa fotsiny ianao teôria ary ianao dia miasa miaraka amin'ireo Windows, Office, C ++ compiler, sns.
Na dia antony iray hafa aza ny hakamoana amin'ny tsy fanomezana azy ireo fampiharana amin'ny CD mivantana satria mino izy fa tsy hiasa amin'ny sehatry ny asan'ny mpianatra izany, satria ny programa manokana dia ampiasaina avy amin'ny sekretera tsotra mankany amin'ny mpanatanteraka ambony ( a) betsaka ny milaza ka mitady bebe kokoa azy io, fa raha nitranga tamintsika, toy ny any amin'ireo firenena izay nandray tanteraka ny rindrambaiko maimaimpoana dia efa manana ny fiheverana fototra ny tanora ary mino ahy fa hisaotra anao tsy misy farany izy ireo.
Amin'ireo lohahevitra izay mampiasa ny mpandefitra teny, takelaka ary fampisehoana miaraka amin'ny slide, manorata fandaharam-potoana amin'ny laboratoara adiresy efatra ka hatramin'ny valo alohan'ny famaranana ny enim-bolana. Ny vahaolana tsara indrindra Mety ho ny fampiasana ny sasany amin'ireo fonosana automatisation birao maimaim-poana de misy ny fomba LibreOffice, Openoffice, Caligra sns.
Toy izany koa, ho an'ny lohahevitra fanaovana sary sokitra raha any am-pianarana ianao dia manana fahazoan-dàlana CorelDraw ao amin'ny laboratoara fanao fandaharam-potoana efatra ka hatramin'ny valo ora alohan'ny faran'ny enim-bolana voatendry hiara-miasa amin'ny Inkscape ohatra Na ampiasao ho lozisialy lehibe rehefa tsy manana lisansa CorelDraw ianao.
Raha mampianatra taranja siantifika solosaina ianao, dia asaina misintona ny sary ISO ianao ary mandoro ny iray amin'ireo tetikasa ireo amin'ny CD na DVD:
Ny hetsika hataonao dia afaka tsiroaroa na ampahatelony, miankina amin'ny isan'ny mpianatra anananao ao an-dakilasy sy izay tianao holaniana amin'ny CD, ny fotoana azonao omena an'ity hetsika ity dia telo ka hatramin'ny enina ora eo antenatenan'ny enim-bolana.
Hetsika iray hafa azo tanterahina dia ny fanomezana fikarohana fanadihadiana momba ny rafitra fiasa Linux, fizarana, tombony sns. Raha toa ka efa tsy ampy fitaovana informatika intsony ny sekoly dia azon'izy ireo atao ny mamerina amin'ny laoniny ireo milina ireo amin'ny alàlan'ny fanaovana fanao fametrahana fizarana maivana toa ny Lubuntu o Puppy Linux.
Raha misy resaka famelabelarana momba ny sarimiaina dia omeo fotoana ahazoana misintona Synfig Studio avy amin'ity rohy manaraka ity http://www.synfig.org/cms/en/download/ Azoko atao ny mandinika programa tsara toy ny Flash, ny ora ilaina hiasa miaraka amin'ilay programa dia avela ho tian'ny mpanolotsaina alohan'ny faran'ny semester.
Ny lohahevitra hafa tafiditra dia ny famoronana pejy HTML, ao anatiny no ahafahanao manaraka làlana roa: ny notepad na rindrambaiko famolavolana tranonkala, raha misafidy ny safidy voalohany ianao dia tsy misy heloka bevava enjehina satria ny rafitra miasa rehetra ampidiro am-boany ny tonian-dahatsary an-tsoratra. Fa raha te hampiasa rindranasa toa ny Dreamweaver ho mora ianao, dia manolotra anao aho hanandrana Bluefish Hanao asa tsara ny fanangonana pejy HTML.
Azonao atao koa ny mameno ny lohahevitra amin'ny programa PHP (misintona XAMPP) hanao pejy mavitrika izay hanompo ny zanakalahinao amin'ny tetik'asa ho avy.
Raha ianao no fampihorohoroana amin'ny programa ary azonao ampiasaina hianarana fiteny vaovao ny safidy Python y Ruby izay mampiavaka ny fahatsoran'izy ireo ny syntax, haingana izy ireo hianatra sy hiampita sehatra, fa raha iray amin'ireo izay maniry hampianatra ny fomba taloha amin'ny C na C ++ ianao dia afaka mampianatra ny zanakao amin'ny fomba mitovy amin'ny fanaony ao amin'ny Windows, ity tutorial fametrahana kely afaka manompo anao.
Raha ny momba ny fototr'asa fototra, azonao atao ny mampiasa ilay fitaovana DIA ho an'ny famelabelarana ny kisary mikoriana ary arosoy izany amin'ny fampiasana taratasy sy pensilihazo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » hafa » Rindrambaiko maimaimpoana any an-tsekoly
Tena tsara tokoa ireo orinasam-pampianarana ary tsy ny sekoly sy ny oniversite ihany fa ny oniversite ihany koa, nampiasa rindrambaiko maimaimpoana amin'ny ankamaroan'ny hetsika, ny fitaovana ananantsika ao amin'ny Linux dia manana kalitao maro.
Eny eny, araka ny nolazain'izy ireo. Mila "mamaha ny ampondra" tsikelikely ianao. Eto Mexico dia tsy fahita firy (raha ny fahitako azy) ny sekoly izay manana programa rindrambaiko maimaim-poana farafaharatsiny, noho izany anjaran'ny mpampiasa rindrambaiko maimaimpoana no mampiseho ny tombontsoa azo avy aminy.
Nilaza tamiko izy ireo fa tsy maintsy niandry aho taorian'ny nidirako tao amin'ny oniversite hahitako hoe inona ilay rindrambaiko maimaimpoana?
Na izany na tsy izany, eto (amin'ny Orogoay) izao dia tsy mitovy ny zavatra. Ny ankabeazany (ary tsy milaza ny zava-drehetra aho satria tsy fantatro ny firenena iray manontolo) solosaina efitrano fandraisam-bahiny amin'ny lisea mihazakazaka ao amin'ny Ubuntu sy OpenOffice. Androany, ampianarina isika rehetra "inona izany zavatra hafahafa tsy Windows izany."
purapillan dia hoy izy:
hehehe ... manana edubuntu amin'ny pc 47 ao am-pianarana aho ...
Afaka naharesy lahatra ilay tale ihany aho tamin'ny farany ary nanomboka tamin'ity taona ity edubuntu feno!
Mamaly an'i purapillan
Misaotra tamin'ny lahatsoratra roa farany nataonao. Nilaza i Diazepam fa tsy maintsy niandry izy aorian'ny nidirany tao amin'ny "kolejy mba hahitana hoe inona ilay rindrambaiko maimaimpoana"; Tsy maintsy niandry mandra-pahavitan'ny fianarako aho, heh heh.
Misaotra betsaka anao ihany koa tamin'ny valiny farany natrehinao momba ny olako tao amin'ny forum. Rahampitso dia andramako ny vahaolana izay tsipihinao ao.
Salama, lahatsoratra tena tsara, mahamenatra ny tena fahalianana kely amin'ny sekoly hampianatra rindrambaiko maimaimpoana, fantatro ny momba ny rindrambaiko maimaimpoana amin'ny famakiako manokana amin'ny Internet.
Mandalina diplaoma antonony amin'ny siansa informatika (rafitra microcomputer sy tambajotra) aho ary farafaharatsiny amin'ilay lohahevitra (Office Applications) vitako ny nampianatra ny mpampianatra hampianatra ny LibreOffice ihany koa, ankehitriny, aorian'ny fanaovana fampihetseham-batana amin'ny Word na Excel, dia manao toa izany koa isika ao amin'ny Writter sy amin'ny Calc, tsara, zavatra dia zavatra.
Famihinana ho an'ny rehetra
Adalana ny olona ary voafitaka koa.
Raha tokony ho eo am-pelatanan'ny orinasa tsy miankina, toa an'i Microsoft, izay tsy maintsy mandoa vidin'ny fanararaotana ny fahazoan-dàlana ho takalon'ny rindrambaiko tsy dia misy kalitao, no miloka ary manambatra hery mba hampiroborobo ny rindrambaiko maimaimpoana, dia tombony daholo izany.
Manana OS manara-penitra toa an'i Linux isika, ary misy tetikasa marobe manodidina azy izay miaraka amina tsindry kely dia hitombo be ary mankasitraka antsika rehetra.
Fa raha tokony miloka amin'ny Linux sy ny rindrambaiko maimaimpoana dia maro no manapa-kevitra ny hitady fomba hafa. Tena adala ny olona, ​​hoy i Einstein.
Fantatrao ny rafitra fandidiana izay tena tianao, ny Sanex ... JAJAJAJAJAJAJAJAJA. Tsara.
hey namana afaka mampita pejy ahy hianarako python amin'ny fomba tsotra ianao, misaotra; Tsy maninona na amin'ny anglisy na espaniola.
Etsy andaniny, rindrambaiko maimaim-poana.
Raha ny hevitro manetriketrika dia heveriko fa mahasoa ny miantehitra amin'ny fomba fandoavam-bola elektronika izay malaza toa ny PayPal ohatra; Eny, tsy ny olona rehetra no mampiasa fomba mitovy amin'ny fandefasana fanomezana.
Raha afaka manome ho an'ny Linux Mint amin'ny fomba mitovy amin'ny fangatahako famerenam-potoana amin'ny alàlan'ny finday aho dia tsara izany.
@santiago, ao amin'ny forum ao amin'ny faritra ho an'ny fampandrosoana dia misy fampahalalana momba azy, ary ao amin'ny lesona koa.
@nosferatuxx, nangalariny ny paypal-ko, ary fantatro fa tsy izaho irery, ho ahy ny fomba azo itokisana indrindra dia ny fametrahana mivantana ny kaonty na famindrana elektronika tsy misy mpanelanelana, tsy misy paypal.
Ny zavatra tsara dia mizaha toetra rindrambaiko maimaimpoana ao amin'ny ivon-toeram-piasan'izy ireo koa ny mpiara-miasa hafa, traikefa nahafinaritra ny miasa sy manaparitaka ny SL
Nahazo roa heny aho, fa ny "ahy hafa" dia Troll